Local News – ပဒသော
ဒီဗွီယိုဖိုင်လေးကတော့ အွန်လိုင်းမှာ လူကြိုက်များနေတဲ့ အဆိုတော် ဆောင်ဦးလှိုင်ရဲ့မိုးခါးရေ သီချင်းကို ဟန်ပါပါ မာန်ပါပါနဲ့ ဆိုပြတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဗွီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ရှိတဲ့ဂစ်တာလေးနဲ့ ကလေးနဲ့အတူဆာင်ဦးလှိုင်ရဲ့မိုးခါးရေ သီချင်းကို စိတ်ပါလက်ပါ သီဆိုနေတဲ့ ပုံရိပ်ကိုလည်း လူတိုင်းသဘောကျနေပါတယ်။ ဆာင်ဦးလှိုင်ရဲ့မိုးခါးရေ ဟာလည်း လူငယ်တွေအတွက် လမ်းမှားမရောက်အောင် လမ်းပြပေးတဲ့သီချင်းဖြစ်လို့ ပရိတ်သတ်တွေက အလွန်ပင်ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ လူ့ဘဝမှာ လက်ရှိဘဝကို
ရန်ကုန်မြို့ သိမ်ဖြူလမ်းမပေါ်မှာ ညအချိန် ရိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု ရန်ကုန်မြို့ သိမ်ဖြူလမ်းမပေါ်မှာ သြဂုတ်လ ၁၂ ရက် ညအချိန် ရိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်…တရားဥပဒေမဲ့လွန်းလှပါတယ်ဗျာ… “တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး”ဆိုသည့် စကားရပ်အား မကြာခဏဆိုသလို အသုံးပြုကြပြီး ထိုစကားရပ်ပေါ် တွင်လည်း မကြာမကြာ နားလည်မှုလွဲမှားလေ့ရှိသည်။ မြန်မာဘာသာတွင် ထိုဝေါဟာရအား “ဥပဒေဘောင်အတွင်းနေထိုင်ခြင်း ဘေးကင်းရန်ကွာ စိတ်ချမ်းသာ”ဟု အများအားဖြင့် ဖော်ပြလေ့ရှိ သည်။ ထိုစကားရပ်မှာ
အပိုင်း(၁) ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနာမည်အသုံးချပြီး လူကြီးတွေနဲ့တွဲသွားတွဲလာပြုလုပ်၊ တွဲရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံများအသုံးချကာ ငွေကြေးလိမ်လည်နေလို့ သတိထားကြစေလို အပိုင်း(၂) ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမည်။ အပိုင်း(၁) ဝန်ကြီးခ်ုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနာမည်အသုံးခ်ပြီး လူကြီးတြေနဲ့တြဲသြားတြဲလျာပုလုပ်၊ တြဲရိုက္ထားတဲ့ ဓာတ္ပုံမ်ားအသုံးခ်ကာ ငြေကြးလိမ္လည်နေလို့ သတိထားကြေစလို အပိုင်း(၂) ဆက္လက္တင္ဆက်ပေးပါမည်။ Unicode အပိုငျး(၁) ဝနျကွီးခြုပျဦးဖွိုးမငျးသိနျးနာမညျအသုံးခပြွီး လူကွီးတှနေဲ့တှဲသှားတှဲလာပွုလုပျ၊ တှဲရိုကျထားတဲ့ ဓာတျပုံမြားအသုံးခကြာ ငှကွေေးလိမျလညျနလေို့ သတိထားကွစလေို အပိုငျး(၂) ဆကျလကျတငျဆကျပေးပါမညျ။
မေမေ့အသည်းမြေမခပါစေနဲ့ ချစ်သောမေမေ ကိုးလ လွယ် ဆလ ဖွား အသက်အန္တာရယ်ကြားက အမေကြိုးစား မွေးဖွားပေးခဲ့ပေမဲ့…..သား…. ကံကြောင်းမလှလို့ ဖြစ်မှာပါလေ မေမေ့ရင်ခွင်ထဲ ခိုကာကပ်လို့ နို့ချိုချို အားအင်ပျိုးဖို့ကံလည်း သားမှာ ပါမလာခဲ့လို့ နေမှာပါ မေမေ မေမေရှိသမျှ အင်အားနဲ့ ကြိုးစားကာ မွေးခဲ့လို့… အားအင်ကုန်ခမ်း မောပန်းလို့လည်း နေပြီပေါ့လေ သားအတွက်လည်း စိတ်ဖြေနိုင်သလိုသာ
သုတစုံ | August 14, 2020
ဇင်မာဝမ်းဆိုတာ တစ်ချိန်က မြန်မာ့ဘော်လုံးပရိတ်သတ်များကြားမှာ တိုက်စစ်မှာ ဇင်မာဝမ်း၊ နောက်တန်းမှာဆို အသင်းခေါင်းဆောင် စန်းစန်းမော် ဆိုပြီး ပြောစမှတ်တွင်ခဲ့ကြရတဲ့ အမျိုးသမီးဘော်လုံးကဝေတွေထဲက တစ်ယောက်ပါ။မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အမျိုးသမီးဘော်လုံး ကစားသမားဟောင်း ဇင်မာဝမ်းဟာ မြို့နယ် လက်ရွေးစဉ်၊ ခရိုင်လက်ရွေးစဉ်နဲ့ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်လက်ရွေးစဉ်ပွဲတွေမှာ အဆင့်ဆင့်ကစားပြီးမှ ၁၉၉၈ မှာ နိုင်ငံအမျိုးသမီးလက်ရွေးစဉ်အသင်းမှာ ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက အကိုသုံးယောက်နဲ့ ဘော်လုံးလိုက်ကစားရင်း ဘော်လုံးအားကစားကို ရူးသွပ်ဝါသနာပါခဲ့တာပါ။ဘယ်လိုစိတ်တွေနဲ့
ငွေတွေလိမ်သွားတဲ့ လူလိမ်ကိုအမြန်ဆုံးဖမ်းပေးဖို့ တောင်ဆိုးနေကျတဲ့ ပဲခူးသားများ….(ရုပ်သံ)
မလေးရုားနိူင်ငံတွင်မြန်မာနိူင်ငံသားများအာမြန်မာနိူင်ကို အောက်လမ်းဖြစ်ပို့ပေမည်ဟုဆိုကဟိုတယ်တစ်ခုတွင် ထာ၍ငွေများကိုယူဆောင်ထွက်ပြေသွာသော် ကိုဇော်ဝင်(ခ)ကိုဇော်မင်သည်ယ္ခု ပဲခူးတိုင်တွင် ကောနဲသင်းဝင်နေပါတယ်ပဲခူမြိုတွင်နေရာ(၅)ခုထဲက တစ်ခုတွင်ရီုးနေပါတယ်ဝိုင်ဝန်းကူညီပေးကြာပါရန်း မြန်မာတမိလ်ဟိန်ဒူနာရေးမလေးရုား ကိုမိုး 0127666058 0102729483. 🙏🙏🙏 Unicode မလေးရုားနိူငျငံတှငျမွနျမာနိူငျငံသားမြားအာမွနျမာနိူငျကို အောကျလမျးဖွဈပို့ပမေညျဟုဆိုကဟိုတယျတဈခုတှငျ ထာ၍ငှမြေားကိုယူဆောငျထှကျပွသှောသျော ကိုဇျောဝငျ(ခ)ကိုဇျောမငျသညျယ်ခု ပဲခူးတိုငျတှငျ ကောနဲသငျးဝငျနပေါတယျပဲခူမွိုတှငျနရော(၅)ခုထဲက တဈခုတှငျရီုးနပေါတယျဝိုငျဝနျးကူညီပေးကွာပါရနျး မွနျမာတမိလျဟိနျဒူနာရေးမလေးရုား ကိုမိုး 0127666058 0102729483. 🙏🙏🙏
ရွှေနိုင်ငံကိုရောက်နေတာ မှတ်မှတ်ရရ တစ်နှစ်ပြည့်သွားခဲ့ပြီ ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလာတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသား စီနွန်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံခြားသား တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် အလှူအတန်းတွေကို မကြာခဏ ပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ စီနွန်ကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။သူကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေတာ ဒီနေ့ဆိုရင်တော့ တစ်နှစ်အတိ ပြည့်သွားခဲ့ပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေချိန်မှာလည်း အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်နေသလိုအမှန်တကယ် လိုအပ်နေတဲ့ နေရာတွေမှာလည်း မကြာခဏ အလှူအတန်းတွေ ပြုလုပ်လေ့ရှိတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ တန်ခိုးကြီးဘုရားများစွာနဲ့ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလည်း
ဓမ္မာစရိယပါဠိ ပထမပြန်စာမေးပွဲစာစစ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ သံဃာတော်၂၁၈ပါကိုနေ့ဆွမ်းဆက်ကပ် လှူဒါန်းခဲ့သော ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်မှုးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့်ဇနီးဒေါကြူကြူလှမိသားစု
ဓမ္မာစရိယနှင့်ပါဠိပထမပြစာမေးပွဲ စာစစ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်တော်မူနေကြသော သံဃာတော် ၂၁၈ ပါးတို့အား တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မူးကြီး မင်းအောင်လိူင်+ ဇနီးဒေါ်ကြူကြူလှ မိသားစုတို့က နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ်လူါးန်း unicode ဓမ္မာစရိယနှင့်ပါဠိပထမပြစာမေးပွဲ စာစစ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်တော်မူနေကြသော သံဃာတော် ၂၁၈ ပါးတို့အား တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မူးကြီး မင်းအောင်လိူင်+ ဇနီးဒေါ်ကြူကြူလှ မိသားစုတို့က နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ်လူါးန်း
Indonesia နိုင်ငံဟာဆိုရင် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေထဲက တစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ကျွန်းတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ နိုင်ငံဆိုတာကို ပရိသတ်ကြီး အနေနဲ့လဲ သိရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ သူတို့နိုင်ငံမှာ လှပတဲ့ကျွန်းစုတွေရှိတဲ့အပြင် Temple တွေနဲ့ Komodo Island လို့ခေါ်တဲ့ ဖွတ်တွေရှိတဲ့ ကျွန်းကလဲ နာမည်ကျော်ကြားပါတယ်။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေကလဲ သူတို့နိုင်ငံရဲ့ ကျွန်းအလှတရားတွေနဲ့ အစားအသောက်တွေကြောင့် တချို့ဆို အပန်းဖြေဖို့ ခရီးထွက်တက်ကြပါတယ်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာ…
သင်္ကြန်ပိတ်ရက် ၇ ရက် ရရှိမည့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များကို အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ သင်ျကွနျပိတျရကျ ၇ ရကျ ရရှိမညျ့ ၂၀၂၁ ခုနှဈအတှကျ အစိုးရရုံးပိတျရကျမြားကို အောကျပါအတိုငျး ထုတျပွနျကွညောလိုကျသညျ။ သငျြကှနပြိတရြကြ ၇ ရကြ ရရှိမညြ့ ၂၀၂၁ ခုနှဈအတှကြ အစိုးရရုံးပိတရြကမြွားကို အောကပြါအတိုငြး ထုတပြှနကြှညောလိုကသြညြ။ သငွကြှနပွိတရွကွ